Lawa magugu afihliwe awaweli emuva ebuhleni nasemlingo, bese kuba amadolobha afana neParis neBerlin.
Ngaphezu kwalokho, ingqophamlando edume kakhulu eJalimane, isonto elihle kakhulu laseCologne likhululekile ukuvakashelwa. Ukwakhiwa kwayo kwe-Gothic, kupendwe amawindi engilazi, futhi ukubukwa komfula kudumile. Uma uthanda ubuciko, ke Cologne has iminyuziyamu emikhulu noma ubuciko bomgwaqo obumangazayo e-Ehrenfeld. Le ndawo yingxenye yesinqe nemfashini yeCologne, indawo yokuya ekhofi nokuvuna.
U-Eger ulungele impelasonto yokuphumula e-Budapest. Ukukhetha phakathi kohambo losuku noma ikhefu ledolobha elivela eBudapest elakho lonke, kepha sincoma ukuchitha okungenani impelasonto ende kuleli dolobha elijabulisayo.
Amabhishi egolide, izinganekwane zikaJoan wase-Arc waseRuen, isiqhingi saseMont St. Isigodlo saseMichel, ambalwa nje amagugu aseNormandy. Lesi sifunda esihle uhambo lwamahora amabili ukusuka eParis, kodwa ngokungafani nenhlokodolobha yaseFrance, ingenye yezindawo ezingabizi kakhulu ukuhamba eFrance.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Ezingabizi Kakhulu Zokuhamba EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)